Kedu otu esi arụ atụmatụ Amazon nke kachasị mma search engine?
N'ụbọchị anyị, a na-ewere Amazon dị ka ụlọ ọrụ nkwekọrịta nke kachasị elu na nke kachasị baa uru na ihe dị ka 80 nde ndị ọrụ na-arụ ọrụ. A na-ewu usoro nhazi nke Amazon n'ụzọ dị otú a iji mee ka ndị ahịa zụta ihe ọ bụla dịnụ n'elu ikpo okwu. Ha na-agbalị inye ndị ahịa ihe kachasị mma ịzụ ahịa ahịa iji mee ka ha laghachi azụ maka ihe ndị ọzọ. Site n'enyemaka nke A9 algorithm, Amazon na-enye ndị ọrụ nsonaazụ ọchụchọ kachasị mma dabere na mmasị onwe ha na akụkọ ọchụchọ. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, Amazon na-eme ihe niile nwere ike ime ka ọ dịkwuoro ha mfe ịzụta.
Ya mere, ihe niile anyị kwesịrị ime ka anyị nwee ike ịga nke ọma na Amazon bụ ịkwado ndepụta gị dị ka ntụziaka ntụziaka Amazon - ???? ????? r13 ????. Akụkụ atọ bụ isi na-emetụta ọdịdị ngwaahịa na Amazon gụnyere ihe dị mkpa, ọnụego mgbanwe, na ikike ngwaahịa. Na nke a dị mkpirikpi, ị ga-ahụ otu esi arụ usoro Amazon SEO dị irè ma melite ogo ogo gị na mpaghara atọ ndị a.
Mụbaa uru nke ngwaahịa gị
Ihe dị mkpa nke Amazon ranking algorithm bụ iji dakọtara ngwaahịa ndị dị mkpa na ajụjụ onye ọrụ. Ọ pụtara na uru nke ngwaahịa gị ga-emetụta ogo ngwaahịa gị. E nwere ma ọ dịkarịa ala akụkụ asaa dị ịrịba ama nke ngwaahịa gị na-edepụta na ị ga-eburu n'uche:
nchịkọta aha aha Amazon bụ ọtụtụ mgbagwoju anya karịa Google. Amazon nwere ihe ọ chọrọ maka nchịkọta aha dị ka ihe a nwere ike imetụta mkpebi ịzụ ahịa onye ọrụ. Ọ pụtara na ọ bụrụ na edeghị aha gị n'ụzọ ziri ezi ị gaghị ebuli elu na Amazon SERP. N'ebe a, i kwesighi ilebara anya maka ihe ederede gi. I kwesiri ileba anya banyere aha aha gi. Ọ bụ ihe ezi uche dị na ya ịkọ banyere àgwà na njirimara ngwaahịa gị, na-ewepu ozi ndị ọzọ. Okwesiri ighota na Amazon amalitela igbanwe ma wezie aha ya.
Nkeji edemede a na-edezi n'elu aha. N'ebe a, ị ghaghị ịkọwa isi ihe dị mkpa, na-eme ka olu kwuo uru ọ bara. Okwu mkpado bụ mkpụmkpụ okwu dị mkpirikpi nke na-akọwa ihe na-ere ngwa ngwa. Na-aguta ozi a, Amazon shopper kwesịrị ịghọta ma ọ chọrọ ịzụta ngwaahịa, ma ọ bụ.
Nkọwapụta nkọwa na-enye ihe ọmụma zuru ezu karịa bọtịnụ. Ngalaba a na-aza ajụjụ niile nke onye ọrụ na-enyere ha aka ịme mkpebi ziri ezi. Ọ bụ ihe ezi uche dị na ya iji bulie nkọwa ngwaahịa gị ma tinye ebe ahụ ọchụchọ kachasị mkpa. Ọ ga-emetụta ogo ngwaahịa gị ma bulie ahịa.
Ọkpụkpọ na emeputa
Ọ bụrụ na ị na-ereghachi ngwaahịa ndị a maara nke ọma maka ndị mmadụ, ịkwesịrị ịgụnye nọmba emepụta na aha gị.
Ngosipụta ọchụchọ Amazon gosiri dịka otu ụdị dị. Ọ bụ ya mere ị ga-eji tinye ihe ndị dị n'okpuru ụdị ya.
Dị ka m kwuru n'elu, enwere isi asaa na Amazon. Ọ bụ ihe ezi uche dị na itinye akwụkwọ ọchụchọ gị ezubere iche na nke ọ bụla iji mee ka ndepụta gị dị na Amazon SERP. Okwesiri ighota na odi mkpa ka i zere onu ogugu okwu nke obula dika o nwere ike imetuta onodu nzuko gi na Amazon.
A ga-akwụnye nlezianya anya na Amazon nyochachasị URL dị ka ọ bụ ụzọ zuru okè iji chọpụta mkpa nke ndepụta na ọchụchọ. Atụmatụ ọkọlọtọ ọkọlọtọ dịka "Keywords = ngwaahịa gị". "Ị nwere ike belata ya site na iji ntanetị pụrụ iche, n'ikpeazụ, na-ebugharị ụgbọala na ya. Dị ka a rụpụtara, Amazon ga-ekpebi na ndị ọbịa ahụ nyochaa ngwaahịa gị maka iche isiokwu gị.
Mee ndepụta gị nke ọma gbanwere
Mee ndepụta gị nke ọma-gbanwere dị oké mkpa maka ọkwa dị elu Amazon. Ọ bụrụ na ịnwe oke ọmụmụ ntọghata, ọ na-egosi Amazon na ndị ọrụ na-ahụ ngwaahịa gị, ma yikarịrị ka ndepụta gị ga-apụta na TOP Amazon.Ihe ndị na-esonụ ga-emerịrị iji bulie ọnụego ntọghata ngwaahịa gị.
Ihe kachasị mma na Amazon bụ ahịa. Ọ bụrụ na ịnwe akụkọ ihe mere eme dị ogologo ma dị mma, ị ga-ebuli elu na Amazon SERP. Ngwaahịa ndị kasị elu ahịa na-agbaso n'usoro Amazon ihu n'ihu ka ha na-eweta ego ọzọ na Amazon.
Otu ihe ọzọ dị mkpa maka amapụta Amazon bụ ọnụọgụgụ na nyocha nke ngwaahịa.Tupu ịmalite ịzụta, ndị ọrụ na-enyochakarị ndị ahịa ndị gara aga iji chọpụta ihe ndị ọrụ ndị ọzọ na-ekwu banyere ya. Ịkwesịrị ịmepụta nyocha ndị ọzọ, karịsịa mgbe ị na-edepụta ndepụta ọhụrụ. Otú ọ dị, jide n'aka na ị gaghị eme ka ndị ahịa gị dee echiche dị mma dị ka o nwere ike imetụta ọnọdụ gị.
Amaghị m otú ajụjụ na azịza ngalaba si emetụta ọnọdụ ndị ngwaahịa, mana ọ dị mkpa mgbe metụtara njikọ n'ihi ike ya nwere ike imetụta ọnụego a na-agbanwe. Ọ bụrụ na enweghị nzaghachi doro anya maka ajụjụ ndị ahịa, ha nwere ike ịchọrọ na ị maghị ngwaahịa ahụ ma ọ bụ na ị dị umengwụ iji lelee mkpa ndị ahịa gị.
Ọdịdị nke ihe oyiyi ngwaahịa gị dị oké egwu maka ọkwa ọkwa Amazon. Ịkwesịrị ịnye ndị ọrụ ikikere ịlele nlele nke ọ bụla. Ọ bụ ya mere ọ ga-eji chọọ ka pixel pikselị dị elu kwesịrị ịbụ ma ọ dịkarịa ala 1000 px ma ọ bụ karịa. Ọzọkwa, jide n'aka na ị nwere foto ndị ọzọ nke onyinyo gị iji gosipụta nkọwa niile achọrọ.
Ọ bụrụ na ị bụ onye ahịa Amazon, ị ga-enwerịrị ikere òkè n'ahịa agha. Ndị ọrụ na-azụkarị ngwaahịa ndị dị ọnụ ala n'ahịa. Ọ bụ ya mere ị ga-eji na-asọmpi ọnụahịa gị. E wezụga nke ahụ, ọ bụ otu n'ime ihe ndị ahụ ma onye na-ere ahịa nwere ike imeri igbe Buy.
Belata ọnụego mgbagwoju anya
Ụgwọ ọnụ, yana oge onye ọrụ na-eji na ngwaahịa gị, nwere ike imetụta ọnụego gị. Ọ bụrụ na onye na-azụ ahịa na-anọ ogologo oge na peeji nke gị, ọ ga-emetụta ọnụego mbugharị gị, Amazon ga-enwekwa ike ịkwalite ọkwa gị. Ọ bụ ya mere ị ga-eji soro usoro ndị dị otú ahụ mgbe niile ka ị nwee ike ichegharị usoro gị n'oge.